Owethenisi wase-Ukraine ujoyine impi neRussia | Scrolla Izindaba
Owethenisi wase-Ukraine ujoyine impi neRussia
Umdlali wethenisi wase-Ukraine uSergiy Stakhovsky uyeke ukungenela umqhudelwano we-Australian Open wakhetha ukuvikela izwe lakhe ekuhlaselweni i-Russia.
Lo mdlali oneminyaka engu-36 ubudala ubejabulela iholidi e-Dubai ngesikhathi ethola ucingo oluvela kubazali bakhe bethi bayahlaselwa.
UStakhovsky uthe akakujabulelanga ukulala izinsuku ezintathu njengoba ukukhathazeka kwakhe ngokuphepha kwabazali bakhe bekumenza angalali.
“Angizange ngizikholwe izithombe ebengizibona. Bengizama ukuqonda ukuthi umndeni wami ukuphi, wenzani nokuthi kubi kangakanani,” etshela i-BBC.
UStakhovsky wenze isinqumo sokuthatha umhlalaphansi ngemuva kokuhlulwa e-Melbourne eqeda umsebenzi wakhe weminyaka engu-19 lapho ebekwe endaweni ngamaphuzu angu-31 kanye nokuhlula uRoger Federer ngo-2013.
Akazange abe nesikhathi esiningi sokuphumula njengoba elibangise e-Kyiv eyobhalisela umbutho wezempi. Noma engaqeqeshiwe uStakhovsky ubethukuthelele amabutho ase-Russia ngemuva kokuba izakhamuzi zasedolobheni lase-Bucha zihlukunyezwe, zidlwengulwe futhi zibulawe.
“Izinto abazenzile kanye nendlela abazenze ngayo ayinabo ubuntu. Ngeke ngikwazi ukuchaza inzondo enginayo ngebutho lase-Russia,” kusho uStakhovsky.
“Abantu abahlala lapha bebengeyona ingxenye yale mpi. Bebengafuni ukuhlanganyela bebeyizakhamuzi nje.” Uthe angeke ananaze uma ebona isosha lase-Russia.
“Ngiyazi ukuthi bengizokwenzani,” kusho lo mdlali.
Ngokungafani nabadlali abaningi bethenisi uStakhovsky umi ngemuva kwesinqumo sikaWimbledon sokuvimba noma imuphi umsubathi wase-Russia noma owase-Belarusian ekuqhudelaneni kwi-Grand Slam.
Unomuzwa wokuthi abasubathi base-Russia abenzanga okwanele ukumelana nesinqumo sokuhlasela i-Ukraine sikaMengameli wase-Russia uVladimir Putin.
“Emasontweni ambalwa okuqala ngangikholwa ngokweqiniso ukuthi i-Russia uma isibonile okwenziwa amasosha, ibuka ukucekelwa phansi kwamadolobha, ukuqhunyiswa kwamabhomu emadolobheni afana ne-Kharkiv ne-Kyiv ibizophenduka ibhikishe,” kusho uStakhovsky.
“Kodwa lokho akwenzekanga abantu abaphumanga. Bambalwa abeza ukuzobhikisha futhi bebengabaningi.”
Umthombo wesithombe: @SportDaily24